Izay afaka hihaona ny olona
Ny ankamaroan’ny tovovavy dia tsy mahalala izay mba hihaona ny olona, fa misy toerana hihaonana ary aiza no ahitana azy. Raha ny marina, ny zavatra rehetra dia tsotra noho ny toa izany, ary dia ho tsara ny mahita olona iray izay misafidy. Ao amin’ity lahatsoratra ity, ianao, dia izahao izay toerana misy anao dia mety hihaona amin’ny lehilahy na vehivavy ny nofy, izay toerana mba hitsidika sy ny toerana ahitana azy ireo. Io safidy io dia tsara ho an’ireo ankizivavy izay tsy te-hanatevin-daharana ny olombitsy. Na dia izany aza, araka ny fitsapan-kevitra mampiseho, ankehitriny ny ankizivavy, dia tsy toy izany izy ireo rehefa hanafika eny an-dalambe. Noho izany, ry namana, raha jerena ny henjana ny fanehoan-kevitra, aza maika ny miresaka ny vehivavy eny an-dalambe. Ny lehilahy ny tenany fantany fa tsara kokoa ny tsy hikasika ny ankizivavy eny an-dalambe. Raha tsy hoe, mazava ho azy, izy no mahatonga ny tenany ho fantatra. Raha mila lehilahy manan-karena, haka ny fihaonana any ho any ao afovoan-tanàna. Hitady ny fikambanana amin’ny kilasy voalohany laza. Eny, ianao mila misoratra anarana, fa na izy tenany aza dia azo antoka ny zo: somary manan-karena fifantenana ny gyms ho ambany fifaninanana tompokovavy ihany no tonga eto izao: mba hihaona sy ny mandany fotoana. Eto ihany no azonao fintinina ny jiro: Matetika ny andro manaraka, ao amin’ny mazava, toa, omaly, lehilahy tsara tarehy, ianao dia hahita ny tena biby goavam-be amin’izao fotoana izao. Ary indray mandeha indray: tsarovy foana fa alina ny vahiny, ny ankamaroan’izy ireo, dia vonona ho an’ny tsy manam-paharoa ny resaka. Raha toa ny drafitra dia tsy hihoatra indray hariva, dia mandeha mialoha, fa raha te-hahita ny olona iray ho an’ny fifandraisana, mitandrina. Na iza na iza afaka ny ho tonga lafatra ny toerana hihaonana. Izany no izay ny ankamaroan ny mpampiasa ny tranonkala ireo dia manambady sy ny virjiny, nefa, tsy dia maro ny ara-dalàna ry zalahy ao amin’ny Internet. Fa misy tokoa ny sasany, toy ny antontan’isa, izay efa voasoratra ara-panjakana ny fifandraisany rehefa Mampiaraka ao amin’ny Aterineto. Ka angamba tsara vintana ianao, fotsiny ianao dia tsy maintsy mitandrina. Fampirantiana, ny horonantsary, famelabelarana.
Ny antsasany mahery amin’izy ireo no ho workaholics, workaholics, workaholics. Fa tsara kokoa izany noho ny mpisotro toaka na seducers. Mba hijery avy ho an’ny zavatra toy izany, ny lifemate mety ho niafina tao. Mpivady maro izay miditra ny fifandraisana sy hahafantatra ao amin’ny vanin-taona mafana, tao amin’ny fialan-tsasatra, tao amin’ny tora-pasika. Io dia satria rehefa avy miasa, ny olona iray mahatsapa kokoa malalaka sy misokatra. Izy dia vonona ho vaovao ny fivoriana sy ny fifandraisana, ary koa noho ny zavatra rehetra izay vetivety niala tamin’ny lasa. Avy amin’ny fahatoniana, koa tsy mba akaiky ny tenanao sy tia mifandray, na raha toa raha vao jerena ny zazalahy na lehilahy iray tsy toa ny iray mitady.
Ny fahatsapana voalohany dia mamitaka
Nahomby indrindra ny fifandraisana hanana taorian’ny fivoriana any am-pianarana na any am-piasana. Misy antony maro noho izany, indrindra fa ho sambatra ny fianakaviana, nefa ihany koa fa tsy mbola nahalala ny zava-miafina rehetra, ny tsara sy ny ratsy toetra any am-pianarana na any am-piasana
← Hitsena ny tovovavy amin'ny fito amby roa-polo taona ny fitiavana sy ny fifandraisana amin'ny Pisces zodiaka sonia. Tsy misy fisoratana anarana. Tena sary